Cetilistat (२282526२98२1-XNUMX-१) निर्माता आपूर्तिकर्ता कारखाना
सीएमओएपीआईसँग सेटिलिस्टेटको कच्चा मालको पूर्ण दायरा छ, र कुल गुणवत्ता व्यवस्थापन प्रणाली छ। साथै जीएमपी र डीएमएफ प्रमाणीकरण पारित गरियो।
आणविक वजन 316.31१XNUMX..XNUMX१ g / mol
पिल्ट बिन्दु 190-200 ° C
आणविक सूत्र C25H39NO3
औषधिको खुराक 80-120mg
Cetilistat के हो?
Cetilistat (CAS नं।282526-98-1) ATL-962, ATL 962 वा Citilistat को रूपमा पनि चिनिन्छ मोटाईको उपचारका लागि संकेत गरिएको औषधि हो। यो कम क्यालोरी, कम फ्याट आहार, र वजन व्यायाममा सहयोग गर्न उचित व्यायामको साथ प्रयोग गर्दछ।
सेटिलिस्टेट एन्टी-मोटापा औषधि सहित विभिन्न ब्रान्ड नाम अन्तर्गत बेचिन्छ Cetislim, किल्फाट, Oblean, र Checkwt।
सेटिलिस्ट्याट एक बेंजोकाजाइन हो, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल लिपेस अवरोधक हो जसले मुख्य रूपमा डाइट फ्याटको पाचन र अवशोषण रोक्नको लागि काम गर्दछ।
कसरी Cetilistat मोटापाको उपचार गर्छ?
मोटोपना आज संसारमा सबैभन्दा प्रचलित सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या हो। यो एक जटिल, दीर्घकालीन साथै एक मल्टि फ्याक्टर डिसऑर्डर हो जुन अतिरिक्त फ्याट / एडिपोज टिश्यूको स by्ग्रहको विशेषता हो।
मोटोपना स्वास्थ्य विकारहरूसँग सम्बन्धित छ जस्तै टाइप २ मधुमेह, उच्च रक्तचाप, हाइपरलिपिडेमिया, उच्च कोलेस्ट्रॉल, केही क्यान्सर, र केही हृदय रोग जस्तै स्ट्रोक र कोरोनरी हृदय विकार।
धेरै देशहरूमा मोटाई महामारीको अनुपातमा पुगेको छ र यसैले विश्वव्यापी स्वास्थ्य चिन्ता।
अनुसन्धानले देखाउँदछ कि तपाईको प्रारम्भिक शरीरको तौलको to देखि १०% सम्म निरन्तर वजन घटाउनुले मोटापा सम्बन्धी चयापचय सम्बन्धी विकारहरूलाई उल्लेखनीय रूपमा कम गर्न सक्छ।
Cetilistat एक विरोधी मोटापा एजेंट मानिन्छ। विरोधी मोटापा एजेन्टहरूले सामान्यतया दुबै न्यूरल र मेटाबोलिक रेगुलेसनको माध्यमबाट वजन खर्च बढाउँदछ।
सेटिलिस्टाट एक ग्यास्ट्रोइंटेस्टाइनल अग्नाशय लाईपेज अवरोधक हो जुन मानव अध्ययनमा प्रभावकारी मोटापा विरोधी एजेन्ट हो।
Cetilistat काम गर्दछ पाचन र अनुहार को अवशोषण अवरुद्ध गरेर तपाईं खानेकुरा भित्र। जब बोसो पचाउँदैन यो मलमा आन्दोलनको समयमा मलमा उत्सर्जन हुन्छ। यसले आन्द्रामा ट्राइग्लिसराइड्स (शरीरमा फ्याट / लिपिड) तोड्नका लागि जिम्मेवार इन्जाइम लिपेसलाई रोक्दै यसलाई पूरा गर्दछ।
यो cetilistat प्रभावहरू यसैले जठरांत्र पथमा प्रदर्शन हुन्छन्। यसको तात्पर्य यो छ कि सेटिलिस्टेट अन्य एन्टी-मोटापा एजेन्टहरू भन्दा फरक छ जुन तपाईंको मस्तिष्कलाई भूख कम गर्न प्रभाव पार्छ किनकि यसले परिघ कार्य गर्दछ।
जब पाचन र आहार फ्याटहरूको अवशोषण रोकिन्छ, फ्याटहरूको जम्मा गर्ने सीमित हुन्छ यसैले कम ऊर्जा खर्च हुन्छ जुन परिणाम वजन घटाउँछ।
यद्यपि, सेटिलिस्टेटले वजन कम गर्न मद्दत गर्दछ यसले कम मोटा पौष्टिक आहार कायम राख्नको लागि व्यायामको साथ सफल मोटापा व्यवस्थापनका लागि।
Cetilistat बनाम Orlistat
दुबै सेटिलिस्ट्याट र ओलिस्ट्याट मोटाईको उपचारको लागि प्रयोग हुने औषधी हो। तिनीहरू समान कार्यको प्रदर्शन गर्छन् जसको माध्यमबाट तिनीहरूले वजन घटाउँछन्।
सेटिलिस्ट्याट र ओर्लिस्टाट गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल लिपेस इनहिबिटर हो जसले डाइजेसन पाचन र अवशोषणलाई रोक्छ वा कम गर्दछ। Lipases आन्द्रामा ट्राइग्लिसराइड्सको बिग्रनको लागि जिम्मेवार हुन्छ। अपरिवर्तित चराहरू यसको सट्टा मानव मलमा आन्द्रा चालहरू मार्फत उत्सर्जन गरिन्छ। यस क्रियाकलापले सुनिश्चित गर्दछ कि फ्याट शरीरमा अवशोषित हुँदैनन् जसले तौल घटाउन निम्त्याउँछ।
दुबै सेटिलिस्ट्याट र ओर्लिस्ट्याटमा महत्त्वपूर्ण वजन घटाउने रिपोर्ट गरिएको छ। सेटिलिस्टेट बनाम अर्लिस्ट्याटको सफलता तपाईंको जीवनशैलीमा निर्भर गर्दछ किनकि उनीहरूले तपाईंलाई नियमित व्यायामको साथ न्यून क्यालोरीयुक्त पौष्टिक आहारमा अड्काउनु पर्छ।
सेटिलिस्टेटको साथसाथै orlistat ले वृद्धि ग्लाइसेमिक नियन्त्रणलाई प्लाज्मा ग्लाइकोसाइलेटेड हेमोग्लोबिनमा उल्लेखनीय कमीले प्रमाणित गर्छ। उनीहरूले मोटोपना सम्बन्धी विकारहरूको जोखिम कम गर्दछ जस्तै मुटु रोग, उच्च रक्तचाप, उच्च कोलेस्ट्रोल स्तर, र टाइप २ मधुमेह।
सेटिलिस्ट्याट र ओलिस्ट्याटसँग सम्बन्धित सबैभन्दा सामान्य साइड इफेक्टहरू गैष्ट्रोइन्टेस्टाइनल प्रभावहरू हुन् जुन प्राय: अपरिवर्तित फ्याटहरूको कारणले हुन्छ। जे होस्, जब तपाइँ साइडिस्टिटेट बनाम ओर्लिस्ट्याटलाई साइड इफेक्टको सर्तमा तुलना गर्नुहुन्छ, अधिक साइड इफेक्टहरू सेरिलिस्टेटको भन्दा अर्लिस्ट्याटसँग सम्बन्धित छन्। थप रूपमा, प्रभावहरूको गम्भीरता cetilistat भन्दा orlistat संग बढी स्पष्ट हुन्छ।
जब cetilistat vs orlistat को सहनशीलतालाई तुलना गर्ने क्रममा, cetilistat orlistat भन्दा राम्रोसँग सहिष्णु भएको रिपोर्ट गरिएको छ।
टाइप २ मधुमेह भएका मोटा बिरामीहरूसम्बन्धी १२ हप्ताको अध्ययन ओभरलिस्टको तुलनामा वजन घटाउने, ग्लाइकोसाइलेटेड हेमोग्लोबिन घटाउने र सेटिलिस्टेटको सहनशीलताको मूल्यांकन गर्न गरिएको थियो। उपचार एक कम देखि मध्यम फ्याट डाईट र मधुमेह mellitus metformin प्रयोग प्रबन्धनको साथ जोडीएको थियो।
अध्ययनले पत्ता लगायो कि दुबै सेटिलिस्टेट र ओलिस्ट्याटले वजन घटाएको छ साथै सुधारिएको ग्लाइसेमिक नियन्त्रण। औषधीहरूले कमरको घेरा घटाएर हृदय विकारहरूको जोखिमलाई पनि कम गर्‍यो जुन हृदय रोगको सूचक हो।
यस अध्ययनमा, साइड इफेक्टले ओभरलिस्टेटसँग बढी रहेको गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रभावहरू थिए, र अर्लिस्ट्याट-सम्बन्धित प्रभावहरूको गंभीरता पनि सेटिलिस्ट्याटको भन्दा बढी पाईन्छ। Cetilistat vs orlistat को प्रभावमा भिन्नतालाई उनीहरूको संरचनात्मक र रासायनिक भिन्नतामा श्रेय दिन सकिन्छ।
अध्ययनबाट फिर्ता लिने साइड इफेक्टका कारण थिए र सेरिलिस्टेटसँग भन्दा अर्लिस्ट्याटको साथ थिए। यस बाहेक, सेलिस्ट्याट ओर्लिस्ट्याट भन्दा बढी सहन गरिएको थियो।
कसले गर्न सक्छ Cetilistat प्रयोग गर्नुहोस्?
तपाईं Cetilistat (282526-98-1) लिने विचार गर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईंलाई वजन कम गर्न आवश्यक छ भने। यद्यपि कुनै पनि अन्य औषधि जस्तै यो औषधि लिने बेलामा आवश्यक सावधानी अपनाउनुहोस्।
सेटिलिस्टेट बडी मास इन्डेक्स (बीएमआई) भएका व्यक्तिहरूको लागि सिफारिश गरिन्छ जुन २ 27 भन्दा बढी छ। यदि तपाईको बीएमआई २ 27 भन्दा माथि छ र सेलिस्टिष्ट लिन सल्लाह दिइन्छ भने तपाई मधुमेह र उच्च रक्तचाप जस्ता मोटाईसँग सम्बन्धित अवस्थाहरूबाट ग्रस्त हुनुहुन्छ। BMI शरीरको फ्याटको सूचक हो जुन किलोग्राममा तपाईंको तौल मिटर उचाइको वर्गमा विभाजन गरी गणना गरिन्छ।
यदि तपाईंले सेटिलिस्टेट लिन छनौट गर्नुभयो भने, सिफारिश गरिएको सिटिलिस्ट्याट डोज आफ्नो खानाको साथ लिन नबिर्सनुहोस्। निर्धारित cetilistat खुराक उत्तम खाना संग लिईन्छ, खाना पछि एक घण्टा सम्म वा तपाइँको खाना पछि।
सेटिलिस्टेट औषधि क्याप्सूल वा ट्याब्लेटमा मौखिक प्रशासनको लागि पानीको एक गिलाससँग देखा पर्दछ। तपाईले सेटिलिस्टेट पाउडर पनि फेला पार्न सक्नुहुन्छ। सही सेटिलिस्ट्याट डोज र उपचारको अवधि तपाईंको स्वास्थ्य सेवा प्रदायकद्वारा अवस्था र औषधीको प्रारम्भिक प्रतिक्रियाको आधारमा निर्धारण गरिन्छ।
Cetilistat वजन घटाउनु सुविधाहरू तथापि बालबालिकाहरूको लागि संकेत गरीएको छैन, त्यसैले तपाईंले यो बच्चाहरूलाई दिनु हुँदैन। यो विशेष गरी यौवनमा बच्चाहरूको साथ हो किनकि सेटिलिस्टेटले उनीहरूको बृद्धिलाई अधिक उचाईसँग प्रभाव पार्न सक्दछ।
सेटिलिस्टेट गर्भवती आमाहरू र गर्भधारण गर्ने प्रयास गरिरहेका महिलाहरूको लागि असुरक्षित मानिन्छ। यसले अजन्मे बच्चालाई स्वास्थ्य जोखिम पुर्‍याउन सक्छ।
स्तनपान गराउने आमाहरूलाई पनि सेटिलिस्टेटबाट बच्न सल्लाह दिइन्छ किनकि यसले बच्चामा जान सक्छ।
तपाईको डाक्टरले तपाईलाई सेलिलिस्टेट लिन वा नहटाउन सल्लाह दिईन्छ अन्य प्रचलित स्वास्थ्य अवस्था जस्तै उच्च अतिसंवेदनशीलता, कोलेस्टेसिस (कलेजो रोग), र क्रोनिक मालाब्सर्पोर्ट सिन्ड्रोमको कारण।
Cetilistat साइड इफेक्ट
सेटिलिस्टेट पाउडर सुरक्षित मानिन्छ तर यदि तपाईं सिफारिश गरिएको सेटिलिस्टेट खुराक भन्दा बढि हुनुहुन्छ वा निर्देशनहरू अनुसरण गर्न असफल हुनुभयो भने तपाईंले केही सेटिलिस्टेट साइड इफेक्टहरूको अनुभव गर्नुहुन्छ। यी साइड इफेक्टहरू सुरुमा देखा पर्न सक्छ तर हल्का छन् र ड्रगको निरन्तर प्रयोगको साथ टाढा जानु पर्छ। यदि तिनीहरू जानु हुँदैन भने तपाईंले आफ्नो डाक्टरलाई सम्पर्क गर्नुपर्छ।
सबैभन्दा सामान्य सेटिलिस्ट्याट साइड इफेक्टहरू हुन्;
डिस्चार्जको साथ ग्यास
तत्काल र लगातार आंत्र आन्दोलनहरू नियन्त्रण गर्न गाह्रो हुन सक्छ
तेल वा फ्याट मल
केहि दुर्लभ तर अधिक गम्भीर सेटिलिस्टेट साइड इफेक्ट पनि हुन सक्छ। तपाईंले तत्काल प्रतिकूल प्रभावहरू देख्नुहुँदा तपाईको डाक्टरसँग परामर्श लिनु पर्छ;
पीलिया (आँखा पहेँलो वा सम्पूर्ण शरीर)
निगलने वा सास फेर्न गाह्रो छ।
मोटापा प्रबंधनमा सेटिलिस्ट्याट तौल घटाउने लाभ यसको मुख्य प्रयोगका लागि परिचित छ। त्यहाँ अन्य सेटिलिस्टेट फाइदाहरू छन् जुन यसलाई भिन्न बनाउँदछ र अन्य वजन घटाउने औषधिहरूको बीचमा बाहिर खडा हुन्छ।
तल केहि सेटिलिस्टेट फाइदाहरू छन्;
वजन वजन को माध्यम बाट एक स्वस्थ जीवनशैली कायम राख्न मद्दत गर्नुहोस्
सेटिलीस्टेट एक ठूलो वजन घटाउने औषधि हो साथ साथै एक विरोधी मोटापा एजेंट हो। तपाईको सामान्य जीवनमा अत्यधिक तौल पाउनुले आकार र शरीरको बोसो बढाउने गर्दछ जुन प्राय: बढी तौल वा मोटा हो। दुई सर्तहरू स्वास्थ्य मुद्दाहरूसँग सम्बन्धित छ जस्तै टाइप २ मधुमेह मेलिटस, स्ट्रोक जस्तै उच्च रोग, उच्च रक्तचाप, र केही क्यान्सरहरू जस्तै कोलोन र स्तन क्यान्सरहरू।
अधिक वजन र मोटो व्यक्ति बीचको भिन्नता बडी मास इन्डेक्स (BMI) हो। एक व्यक्ति अधिक वजन मानिन्छ जब बीएमआई २ than भन्दा ठूलो वा बराबर हुन्छ जबकि मोटोपना भएका व्यक्तिसँग बीएमआई greater० भन्दा ठूलो वा बराबर हुन्छ।
सेटिलिस्टेट लिनाले तपाईंको शरीरलाई फ्याटको संचय कम गर्न मद्दत गर्दछ यस प्रकारले स्वस्थ बीएमआई र फलस्वरूप स्वस्थ जीवनशैली कायम गर्दछ। यो यस्तो छ किनकि यसले मोटोपनासँग सम्बन्धित जीवन-सम्भावित अवस्थाको सम्भावनाहरूलाई कम गर्दछ।
मोटो मधुमेह बिरामीहरूमा वजन घटाउने र ग्लाइकोसाइलेटेड हेमोग्लोबिन घटाउन सहयोग गर्दछ
मधुमेह र विशेष गरी टाइप २ मधुमेह मोटाई भएका बिरामीहरूमा सामान्य रोग हो। टाइप २ डायबिटीज तब हुन्छ जब शरीरका कोषहरूले ईन्सुलिनको उचित प्रभावको प्रतिरोध गर्छन्, जुन रक्त कोशाहरूमा रगत ग्लुकोजलाई निर्देशित गर्ने हुन्छ। यसले रगतमा ग्लूकोज स to्कलनमा अग्रसर गर्दछ। मोटोपना धेरै टाइप2मधुमेह को घटना बढाउन को लागि परिचित छ।
ग्लाइकोसाइलेटेड हेमोग्लोबिन (हीमोग्लोबिन जसमा ग्लूकोज बाँधिन्छ) लामो अवधिको मधुमेह मेलिटस नियन्त्रणको उपाय हो। ग्लाइकोसाइलेटेड हेमोग्लोबिन (HbA1c) को स्तर विगत तीन महिनामा औसत रगत ग्लूकोज देखाउँदछ। सामान्य ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन स्तर%% हुन्छ तर मधुमेह भएका अधिकांश व्यक्तिहरूले मात्र%% हासिल गर्न सक्दछ।
१२ हप्तामा, अनियमित, प्लेसबो नियन्त्रणको साथ क्लिनिकल अध्ययन, टाइप २ मधुमेह भएका मोटो बिरामीहरूलाई सेटिलिस्टेट (,०, ,०, वा १२०mg दैनिक तीन पटक) दिइयो। तिनीहरू पनि एक कपटी खानामा अडिग थिए। सेटिलिस्टाटले वजनलाई कम गर्नका साथै ग्लाइकोसाइलेटेड हेमोग्लोबिन (HbA12c) लाई कम गर्न फेला पर्‍यो। यो पनि याद गरियो कि सेटिलिस्ट्याट राम्रोसँग सहन गरिएको थियो।
Cetilistat राम्रोसँग सहन गरिएको छ
वजन घटाउन र मोटापाको प्रबन्ध गर्न यसको प्रभावकारिताको बाहेक, यसमा थप कुरा पनि छ। सेटिलिस्टेट शरीरमा हल्का देखि मध्यम साइड इफेक्टको साथ सहन योग्य छ जुन प्रबन्धनीय हो र जारी सिटिलिस्ट्याट प्रयोगको साथ हराउनेछ।
यद्यपि हामी मध्ये धेरै औषधीमा प्रभावकारिताका लागि जान्छौं, तपाईको शरीरमा सहन सकिने औषधि खोज्न पनि राम्रो हुन्छ।
चरण २ मा क्लिनिकल अध्ययन १२ हप्तासम्म दुबै सेटिलीस्टेट र सामान्यतया उपलब्ध ओर्लिस्ट्याट प्रयोग गरी गरिएको थियो। दुई वजन घटाउने ड्रग्स वजन कम गर्न, ग्लाइकोसाइलेटेड हेमोग्लोबिन घटाउनका साथै कमरको घेरा घटाउन प्रभावकारी देखिए। साथै, सेटिलिस्टेट अर्लिस्ट्याट भन्दा राम्रोसँग सहिष्णु भएको पाइएको थियो, सेटिलिस्टेटसँग सम्बन्धित कम र कम गम्भीर दुष्प्रभावहरूको साथ।
तपाइँलाई छोटो समय भित्र तपाइँको लक्ष्य प्राप्त गर्न मद्दत गर्दछ
वजन घटाउनु एक छोटो अवधि का लक्ष्य हो जुन आहार परिवर्तनको माध्यमबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ र नियमित व्यायामको साथमा छ। यद्यपि स्वस्थ तौल कायम राख्नु दीर्घकालीन लक्ष्य हो।
तपाइँको डाक्टरले एक पर्चेको तौल घटाउने औषधि सिफारिस गर्न सक्दछ जब स्वस्थ जीवनशैली (आहार र व्यायाम) ले इच्छित वजन घटाउँदैन। Cetilistat एक औषधी हो जुन कम फ्याट डाईट र नियमित व्यायामको साथ प्रयोग गर्न सकिन्छ। अन्य एन्टी-मोटापा औषधिहरु जस्तो कि महत्वपूर्ण वजन कम गर्न लामो समय लिन को लागी, सेटिलिस्टेट को लागी इच्छित वजन लाई लिन को लागी १२ हप्ता लाग्छ।
तपाइँको कोलेस्ट्रोल स्तर कम गर्न मद्दत गर्न सक्छ
कोलेस्ट्रॉलले एक मोमी पदार्थलाई जनाउँछ। तपाईको शरीर द्वारा कोशिका निर्माण गर्न यो आवश्यक छ, धेरै शरीरमा समस्याहरू निम्त्याउन सक्छ।
कोलेस्ट्रॉल कलेजोले बनेको छ, जबकि केहि मासु, कुखुरा, र पूर्ण-बोसोयुक्त डेअरी उत्पादनहरू जस्तै तपाईं खान्नुहुने खानाबाट आउँछ। त्यहाँ २ प्रकारका कोलेस्ट्रोल छन्। कम घनत्वको लाइपोप्रोटिन (LDL) कोलेस्ट्रॉल वा "नराम्रो" कोलेस्ट्रॉल र उच्च घनत्वको लाइपोप्रोटिन वा "राम्रो" कोलेस्ट्रोल। LDL ले धमनीहरूमा फ्याट निर्माणमा योगदान गर्दछ त्यसैले स्ट्रोक र हार्ट अट्याक जस्ता हृदय रोगहरूको जोखिम बढाउँछ।
मोटोपनले तपाईंको उच्च कोलेस्ट्रोल स्तरको जोखिम बढाउँछ। मोटापाले LDL कोलेस्ट्रॉलको मात्रा बढाउँदछ तपाईंको शरीरको प्रतिक्रियालाई बदलेर तपाईं खान्नुहुन्छ। मोटोपनाका कारण हुने जलनले तपाईंको शरीरको प्रतिक्रियालाई कम पार्दछ आहार फ्याट सेवनमा परिवर्तन हुनेहरू। थप रूपमा, मोटाई भएका बिरामीहरूमा पनि इन्सुलिन प्रतिरोध सामान्य छ। यसले तपाईंको शरीरमा फ्याटको सामान्य प्रक्रियालाई पनि असर गर्छ।
सेटिलीस्टेटले कुल कोलेस्ट्रोलको साथसाथै LDL कोलेस्ट्रोल कम गर्न सक्छ।
मुसा सम्बन्धी एक अध्ययनमा, सेटिलिस्ट्याट मौखिक रूपमा प्रशासित मोटापा र कुल कोलेस्ट्रोललाई कम गर्न पाईन्छ।
हृदय रोग को जोखिम कम गर्दछ
हृदय रोग एक सामूहिक शब्द हो जुन हृदय र रक्त वाहिकाहरूमा असर गर्ने विकारहरूलाई बुझाउँदछ। हृदय रोगले कोरोनरी धमनी रोगहरू जस्तै हार्ट अटैक र एनजाइना, स्ट्रोक, मुटुको विफलता, र अन्य बीचमा गठिया हृदय रोग समावेश गर्दछ।
हृदय रोग को कारण विशिष्ट विकार मा निर्भर गर्दछ। उदाहरण को लागी, कोरोनरी धमनी रोग, स्ट्रोक, र परिधि धमनी रोग उच्च रक्तचाप, टाइप २ मधुमेह, धूम्रपान, व्यायाम को अभाव, मोटापा, र कम आहार को कारणले हुन सक्छ। मोटोपना लगभग%% हृदय रोग को लागी अनुमान गरिएको छ।
Cetilistat, तसर्थ, मोटोपना को उपचार र हृदय विकार को घटना को रोकथाम गर्न को भूमिका खेल्छ कि एक स्वस्थ आहार प्रोत्साहित गरेर हृदय रोग को जोखिम कम गर्दछ।
१२ हप्ताको अनियमित रूपमा, डबल-अन्धा अध्ययन डायबिटीज मेलेटसको साथ मोटा रोगीहरू सम्मिलित, सेटिलिस्टेट दैनिक times०, ,०, वा १२० मिलीग्राम तीन पटक प्रयोग गरिएको थियो। सहभागीहरूलाई अध्ययन अवधिमा कम फ्याटयुक्त भोजन कायम राख्न सल्लाह दिइयो।
यस अध्ययनले एक महत्वपूर्ण वजन घटाउनका साथै सुधारिएको ग्लाइसेमिक नियन्त्रण रिपोर्ट ग .्यो। थप रूपमा, कम्मरको घेरामा उल्लेखनीय कटौती भएको थियो जुन एक जोखिम कारक हृदय रोग हो।
तपाईंको रक्तचाप कम गर्न सक्छ
उच्च रक्तचापलाई उच्च रक्तचाप पनि भनिन्छ एक स्थिति जसमा धमनीहरूको भित्तामा रगतको बल केही समय माथि माथि रहन्छ। उच्च रक्तचाप खतरनाक छ किनकि यसले मुटुलाई कठोर परिश्रम गर्न बाध्य पार्छ र धमनीहरूको कडा बनाउन अग्रसर गर्दछ।
उच्च रक्तचाप केहि जीवनलाई जोखिममा पार्ने रोगहरू जस्तै स्ट्रोक, मिर्गौला, र अन्यमा यकृत रोगहरूसँग सम्बन्धित छ।
अत्यधिक तौल वा मोटो हुनुले उच्च रक्तचापको सम्भावना बढाउँछ। तपाईंको रक्तचाप तौल को वृद्धि संग बढ्छ।
यसको लागि यसको मतलब हो कि वजन कम गर्नु तपाईंको रक्तचाप कम गर्ने एक तरिका हो। यो जहाँ सेटिलिस्ट्याट आउँदछ किनकि यसले छोटो समयमा महत्त्वपूर्ण वजन घटाउन निम्त्याउँछ।
म कहाँ गर्न सक्छु Cetilistat खरीद गर्नुहोस्?
यदि तपाईं सेटिलिस्ट्याट प्रयोग गर्ने विचार गर्नुहुन्छ भने तपाईंको घरको आराममा अनलाइन किन्नुहोस्। Cetilistat पाउडर cetilistat आपूर्तिकर्ता वा मा अनलाइन उपलब्ध छ cetilistat निर्माताहरु स्टोरहरू CMOAPI cetilistat निर्माताहरु मध्ये एक हो जसले धेरै राम्रो ग्राहक सेवाको साथ गुणस्त उत्पादनहरू बिक्री गर्दछ।
जब सेटिलिस्ट्याट पाउडर किन्नुहुन्छ वा अन्यथाबाट सिटिलिस्ट्याट क्याप्सूलहरू सीएमओएपीआई वा अन्य सिटिलिस्ट्याट आपूर्तिकर्ताहरूले औषधिको उचित प्रयोगको लागि सावधानीपूर्वक लेबलहरू जाँच गर्नुहोस्। सिफारिस गरिएको cetilistat खुराक विचार गर्नुहोस् जस्तो cetilistat निर्माता द्वारा निर्देशन अनुसार तर तपाईंको स्वास्थ्य सेवा प्रदायक द्वारा सिफारिसहरू पालना गर्नुहोस्।
पढाइ cetilistat समीक्षा व्यक्तिगत अनुभव बाट तपाईको यसको प्रभावकारिता र सुरक्षाको राम्रो समझ प्राप्त गर्न मद्दत गर्न सक्छ। सेटिलिस्टेटका अधिकांश ग्राहकहरूले अनलाइन खरीद गर्छन् र उनीहरूको व्यक्तिगत अनुभवहरूको आधारमा सेटिलिस्ट्याट समीक्षा छोड्न सक्छन्।
Cetilistat मूल्य यो एक विचार हो जब तपाईं यसलाई खरीद गर्न चाहानुहुन्छ। CMOAPI एक cetilistat आपूर्तिकर्ता हो जसले एक प्रतिस्पर्धी cetilistat मूल्य प्रस्ताव हुन सक्छ। जे होस्, सेटिलिस्ट्याट मूल्यले तपाईंलाई कमजोर गुणस्तरको उत्पादन छान्न अन्धो पार्नुहुन्न।
तपाईको घरको आरामबाट किन्नु हतारमा खरीदहरू गर्न लोभ्याउन सक्छ, यद्यपि तपाईले पहिले नै आवश्यक औषधिहरूको उपलब्धता थाहा पाउन उचित व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ।
ब्रायसन, ए, डी ला मोट्ट, एस, र डन्क, सी (२००))। स्वस्थ स्वयम्सेवकहरूमा उपन्यास गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल लिपेज इनहिबिटर सेटिलिस्टेट द्वारा आहार फ्याट शोषण घटाउने। क्लिनिकल फार्माकोलजीको ब्रिटिश जर्नल, 67(3), 309–315. https://doi.org/10.1111/j.1365-2125.2008.03311.x.
Hainer V. (२०१ 2014)। नयाँ एन्टीबॉसिटी औषधिहरूको सिंहावलोकन। फार्माकोथेरेपीमा विशेषज्ञ राय, 15(14), 1975–1978. https://doi.org/10.1517/14656566.2014.946904.
कोपेलम्यान, पी। वजन घटाउने, HbA2010c कटौती, र मोटाई मधुमेह रोगीहरूमा एक अनियमित, प्लेसबो-नियन्त्रित चरण 1 ट्रायलमा सेटिलिस्ट्याटको सहनशीलता। ओर्लिस्टेट (Xenical) सँग तुलना। मोटापा (रजत वसन्त, मो।), 18(1), 108–115. https://doi.org/10.1038/oby.2009.155.
कोपेलम्यान, पी; ब्रायसन, A; हिकलिंग, आर; Rissanen, A; Rossner, S; Toubro, S; भालेन्सी, पी (२००)) "सेटिलिस्टाट (एटीएल-2007 962)), एक उपन्यास लिपेस अवरोधकर्ता: १२ हप्ताको अनियमित, मोटो बिरामीहरूमा वजन घटाउने प्लेसबो-नियन्त्रित अध्ययन।" मोटापा को अन्तर्राष्ट्रिय जर्नल। (१ ()): – – –-। doi: 12 / sj.ijo.31। PMID 3।
पाडवाल, आर (२०० 2008) "सेटिलिस्ट्याट, मोटाईको उपचारको लागि नयाँ लिपेस अवरोधक"। अनुसन्धान ड्रग्स मा वर्तमान राय। (()): –१–– पीएमआईडी १94414 18393108१०XNUMX।
यामदा वाई, काटो टी, ओगिनो एच, आशीना एस, काटो के (२०० 2008) "सेटिलिस्ट्याट (एटीएल-962 40)), एक उपन्यास पनक्रिएटिक लिपेस अवरोधकर्ता, शरीरको वजन बढाउने क्षमतालाई कम गर्दछ र मुसामा लिपिड प्रोफाइल सुधार गर्दछ"। हर्मोन र मेटाबोलिक अनुसन्धान। (० ()): – 8 –। डोई: १०.०539 / / s-२००-10.1055-०2008 1076699 PMID १18500680०. S2CID २ 29076657 ०XNUMX